Dayaxan iyo Arladan is Qooraansanaya | Somaliland Post
Home Maqaallo Dayaxan iyo Arladan is Qooraansanaya
Dayaxan iyo Arladan is Qooraansanaya
Bal duul Alloow ila jeedaaliya dayaxan iyo arladan is-qooraansanaya, isku sidkan sidii hal iyo nirigteed, aan kala fogaanayn, haddana is gaadhaynin, majareyaasha ay kala marayaanna aanay mar qudha is laanqayraynaynin, , jeeroo dhulka sidii dermo loo laablaabo, kaddib marka Saacadda Qiyaame timaaddo, kala dhantaalnaanina ku dhacdo isu dheellitirankii iyo habsami-u-shaqayntii Kawnka.
Dahabo iyo Deyr waa laba isbidhaansada, isqooraansada, isuna qaba kalgacayl oo goor walba isu soo hilooba sidii laba qof oo laabahoodu isku xidhan yihiin, marka uu midba ka kale isha ka qaadona wadneyaashooda ay ka gedmadaan habdhacii isku sar jaran ee dhiigtuurka halboowleyaashoodu. Dahabo iyo Deyr ammin dheer ayay isu qalbi furnaayeen, isu qushuucsanaayeen, isna quuddarraynayeen.
Sida aanay dayaxa iyo arladu isu gaadhin, una sii kala fogaanin, isa saamayntooduna tahay mid joogto ah, ayay si la mid ah Dahabo iyo Deyr, goor iyo ayaan, isku yeeshaan saamayn wax-ku-ool ah. Raadaynta dayaxu ku lee yahay arlada waxa ka mid ah awoodda cufjiidashada ee badda ka kicisa maayadaha meelo fog ka hira, dhalisana buuxsanka iyo caarriga badda – taas oo u dhigmi kara sidii neefsasho noolaha laabtiisa si xilliyaysan kor iyo hoos u dhaqdhaqaajin karta. Maxaa se u diidaya sidaas, miyaanay iyaduba ahayn arlo nool!
Isku wareegga Dayaxa iyo Arlada iyo hooyadooda ka sii weyn ee Cadceedda, waxa ka dhasha dayaxmadoobaadka iyo cadceedmadoobaadka. Dhacdooyinka dayax/cadceed madoobaadka oo jira ama la arki karo goor kooban, waxa xilliyo hore loo aqoonsanaa qaar aadamaha ku abuuri jiray filashooyin aan la mahadin oo laga bilkeedsado dhiillooyin, muruqo, cabsi iyo hoog.
Si la mid ah sida uu Dayaxa innoogu soo baxo ama innoogu bidhaamo bil cusub, ugu sii caddaado afar-iyo-tobnaad, ugu shiikho bil sii libdhaysa, daahana ugu sii rogto gudcur, waxa ay Dahabo ugu soo baxdaa isaga (Deyr) muuqaallo iyo saansaanno kala duwan: Sida bilnaan, bashaashnimo, iyo kaaheeda oo isa sii baahiya goorba goorta ka dambaysa, soona dabra wadnihiisa, jeer oo la arki karo in uu jiro ku-dhowaanshiiyo xaggeeda ah oo maragfur u noqon kara tabashooyinka wadnihiisa.
Ayaan darro se, sida Dayaxa iyo Arladu ay u kala weyn yihiin, isla markaana ay ugu kala socdaan jidad kala duwan oo aan weligood kulmaynin, ayaa si la mid ah isaga iyo iyadu aanay marnaba majareyaashoodu isu laanqayraynin.
Isagu waa waayeel sii gaabinaya oo gabow sii gerbiyayo, waayuhu si tartiib-tartiib ah u soo dabrayaan. Dahabo se (sida dayaxa oo kale) jiiro kasta oo ay soo samayso, waxa ay isaga (Deyr) ku dhaaftaa jeeraaro. Sidaas daraaddeed, waxa uu naftiisa hoos ugula xanshashaqaa in ay is-oggolaysiiso saansaanka dhabta ah ee ku sheeggan odhaahda caanka ah “hadhkaaga ama dantaada lagama boodo”. Waa sidaas e, waxa uu waayadan dambe laabta ka jeclaystaa in xawaaraha ay Dahabo isaga ku dhaafayso sii kordhiso, siina labalaabto; maxaa yeelay, kol haddii aanay labadoodu is gaadhaynin, inta ay kolba u sii muuqatoba, waxa ay u tahay boholyow iyo damqasho. Sidaas daraaddeed, waxa uu go’aansaday in uu ku sagootiyo ‘noolow oo nolosha cusub soo dhawee!’ Waxana ay, ugu dambayn, isla af garteen in ay jacaylkoodii ku soo dabbaalaan mid ruuxi ah, keliya sidii walaalo dar Eebbe isu xidhiidhiya, balse ka midaysan fikirka iyo aragtida nololeed, iskuna maamuusa midhaha ka dhasha ama ka baxa maan-hadalkoodu iyo male’awaalkoodu.